Iindaba-Ukudala indawo entsha yeemveliso zangaphandle
Ngomhla we-Meyi ka-2020, i-Besttone co., Ltd iseke isebe elitsha- isebe leemveliso zokhuselo lwangaphandle. Ukuqala uphando kunye nokuphuhlisa iimveliso zokhuselo lwangaphandle.
Kule minyaka ingama-20 idlulileyo, i-The Besttone ikhule yaba yindawo enkulu ebanzi neqolileyo yokufumana iimpahla zokuphanda kunye nophuhliso. Umthamo wemihla ngemihla ungaphezulu kwe-1000pcs yezambatho kunye nemveliso yemaski yemihla ngemihla ingaphezulu kwe-10000 iiPC. Emva kokuqokelela izibonelelo ezahlukeneyo, kunye nokungqubana kwamandla kunye nobuchwephesha obuvuthiweyo, inkampani yangena ngokusemthethweni kwimveliso entsha yaza yaqala uphuhliso lweemveliso zokhuselo lwangaphandle. Iimveliso zibandakanya: iimpahla zangaphandle kunye nezinye izixhobo zokhuselo zangaphandle, ezinje ngeiglavu, idolo, ibhanti yesihlahla, ibhanti yengqiniba, imaski, imaski yobuso, oobhaka, iingxowa zasesinqeni, iingxowa zengalo, umnqwazi ofudumeleyo, intamo, intente, ibhegi yokulala, oomatrasi, izinto zengxowa , ikhava yemvula njalo njalo. Yonke imveliso unako ukufikelela umgangatho esemgangathweni ngamazwe. Kananjalo sinokuvelisa nantoni na efunwa ngumthengi. Eli lelinye isebe lethu: icandelo lokwahlulahlula ngokwezifiso. Kuthetha ukuba sinokuvelisa iimpahla ezifunwa ngumthengi. Kufuneka usixelele kuphela igama lemveliso, umbala, ubungakanani kunye nenjongo. Emva koko siya kuqala ukusebenza ekwenzeni isampuli nganye kuwe. Ewe iya kubandakanya izinto ezifanelekileyo, ubungakanani obufanelekileyo kunye neyona njongo ibaluleke kakhulu kude kube ukwanelisa.
Kuluntu lwanamhlanje, imidlalo yangaphandle iye yathandwa ngakumbi ngokuphuculwa kwenqanaba loqoqosho lwentlalo kunye nokukwazi kwabantu ukuphila. Ngakumbi nangakumbi abantu baqala ukuhlawula ngakumbi kwaye bazame imisebenzi yangaphandle. Ibandakanya ukubaleka, ukukhwela ibhayisikile, ukunyuka intaba, ukunyuka intaba, njl. E-United States, imidlalo yangaphandle yeyona midlalo yesithathu ithandwayo ekuthatheni inxaxheba nakwimveliso. I-England ibisoloko isaziwa njenge "likhaya lezemidlalo", kwaye ikwayindawo ebalulekileyo yokuzalwa yemidlalo yokhuphiswano yanamhlanje. Ngoku, imidlalo yangaphandle njengemidlalo efanelekileyo yokuzihlaziya, yindlela yasimahla kunye neqhelekileyo yezemidlalo kwaye iya ifumana ukuthandwa kwilizwe lonke. Ngophuhliso lwelizwe ngalinye, imidlalo yangaphandle ibe yindlela efanelekileyo yokuphola kubantu kwihlabathi liphela. Kungenxa yoko le nto siye savelisa iimveliso zangaphandle. Siyathemba ukuba iimveliso zethu zangaphandle ziya kukhula zomelele phantsi kwefuthe lezemidlalo yangaphandle.
Ke i-Besttone yethu ineqela lophando, kwaye ineqela elizinikeleyo kwimveliso, ikwanenkonzo efudumeleyo kangangeminyaka engama-20, yamkela ngokunyanisekileyo bonke abathengi kunye nabahlobo abeza kwinkampani yethu ukutyelela kunye nokusebenzisana. Siza kubuyela kuwe umgangatho ophezulu wemveliso kunye nenkonzo enyanisekileyo.